Naqshadeynta tifaftirka: Noocyada nidaamyada shaashadda | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | Design Graphic, General
Markay tahay jaantusaynta waxyaabaha aan ka kooban nahay fursadaha kala duwan. Waxaa jira nidaamyo dhowr ah oo reticular ah oo na siinaya qalfoofyo kala duwan iyo qaabab abaabul ah oo ku saabsan waxyaabahayaga. Markaan xisaabta ku darsaneyno markaan ka shaqeyneyno mashaariicdeena, waa inaan doorannaa xalka ugu habboon.
Kadib waxaan soo jeedinayaa a kala soocista noocyada ugu isticmaalka badan qaabeynta tifaftirka:
Shabakad keli ah: Qaab dhismeedkan waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo qoraalo dhaadheer oo isdaba joog ah sida buugaag ama warbixinno. Waxay leedahay xadad aad u ballaaran, ujeedadeeduna tahay in la gudbiyo xasilloonida, xasilloonida iyo sameynta dheecaanka habka wax akhriska maadaama noocyada noocaan ah ay inta badan soo bandhigaan qoraallo fara badan akhristayaasheena waa inay ku raacaan iyaga amar gaar ah iyo isku xirnaan muuqaal ah. Haddii ay dhacdo inaan adeegsanno dariiqyo aad u dhuuban ama dhuuban, waxaan u gudbin doonnaa dareenka kacsanaanta iyo bilicsanaanta oo aad u camiran oo urursan. Waxay ku jirtaa calaamadaha calaamadaha meesha cinwaanada cutubyada, jabaqda ama qoraallada hoose ay ka muuqan doonaan tusaale ahaan.
Nidaamka qaybsan: Sida magaceedaba ka muuqata, waxay ka kooban tahay modules isku cabbir ah. In kasta oo qaab ahaan ay tahay qaab aad u adag, haddana waxay sidoo kale na siinaysaa tas-hiilaadyo badan, dabacsanaan iyo dhaqdhaqaaq si loo qaabeeyo waxyaabahayaga. Waxay na siisaa fursado aan xadidnayn waana mid aad u habboon haddii aan ku shaqeyneyno qaabab isku dhafan oo bogag ah sida foomam ama jadwallo, in kastoo mararka qaarkood ku xadgudubka noocyadan kala duwan ay noqon karto mid khatar ah maadaama aan dembi ka abuuri karno naqshad culeys badan.
Nidaamka taxanaha badan: Waxay na siisaa dabacsanaan badan iyo kala duwanaansho tan iyo markii aan u kala qoondeyn karno qaybtan qaybo kala duwan oo noocyo ah (qaar ka mid ah sawirro, kuwa kale qoraalka, cinwaanada, meydadka ...). Qaabkayagu wuu kala duwanaan doonaa iyadoo kuxiran tirada tiirarka aan rabno inaan ku darno sidaad ogtahayna tani waxay la jaanqaadaysaa nooca waxyaabaha aan ka qabaneyno, dhexdhexaadka aan naqshadeeyneyno iyo ujeeddada mashruuceenna. Markii aan helno macluumaad fara badan waa inaan dhisnaa qeyb u badan tiirar. Wargeysyada badanaa waxay ku daraan ilaa lix, halka joornaalada ama joornaalada ay badanaa ku isticmaalaan inta u dhaxeysa seddex ilaa afar.
Nidaamka kala sarreynta: Caqligeedu wuu ka duwan yahay nidaamyadii hore tan iyo markii loo qaabeeyey iyadoo lagu saleynayo urur la jaan qaadaya ku-xirnaanshaha iyo ka shaqeynta noocyo badan oo kala duwan ah. Tusaalaha qaababka adeegsada qaab-dhismeedkan ayaa ah mashaariicda bogga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Naqshadeynta tifaftirka: Noocyada nidaamyada shaashadda
daniela jaahiliinta dijo
fikrad been ah malahan runta
Kujawaab daniela la jahli
Aad baad ugu mahadsan tihiin macluumaadkan, wax badan ayey iga caawiyeen qorshahayga 'Graphic Design' 'Mahadsanid :)
Ku jawaab Roo Mtz
5 Xirmo Bulukh Burush oo loogu talagalay Adobe Photoshop